Yintoni enokubuyisa i-AutoCAD 2010-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Oko kunokubuyisela i-AutoCAD 2010
Oko kunokubuyisela i-AutoCAD 2010
Nalu uluhlu lweminqweno ebiphupha ngabasebenzisi be-AutoCAD, abonyulwe ukuba bavote ngaphezulu uluhlu olukhethiweyo lokuvota kutshanje ku khuthazwa:
1 Ukukhusela umzobo woyiloNgamafutshane, ukuba utshintsho kumzobo lunokukhuseleka phantsi kweemeko "zokugqibela".
2 Umphathi webhloko, ayisiyonjongo yokusebenza kwezinto ezintsha, endaweni yokugxininisa kwimisebenzi yeebhloko kwisiphatho esinye nokwenza ukuhlela kube kokusebenza ngakumbi; njengokukhetha ukucoca iibhloko ezingasetyenziswanga, tshintsha umxholo wemveliso ngokulula, ngaphandle kokuphinda wenze iibloksi kwaye unqande ibhloko, kunye nenketho yokuhlaziya indawo yokuphumla kunye nokudlulisela iipropathi phakathi kweebhloko esele zikhona.
3 Inketho yokubonisa ubungakanani obufunekayo kwimibala eyahlukeneyo (ngaphezulu), oku kunganceda kakhulu ukwazi ukuba ubungakanani bokubeka ubungakanani okanye bunyanzelisiwe ngendlela esebenzayo.
4 Ukulawulwa kokukhetha ngelixa usondeza kunye neepaniOko kukuthi, xa izinto zikhethiwe kwaye kusondeza / ipani esetyenzisiweyo, uphawu lokukhetha alulahleki ngelixa usenza umyalo.
5 Esona sixhobo sihle sokuphathwa kwe-isometric
6 Guqula i-multiline isicatshulwa ibe multileader
7 Amanqanaba athile omyalelo wokuzoba, oku ukwenzela ukuba ukwazi ukulawula i-odolo yokubonakalayo kwezinto, ngakumbi xa zigcwalisiwe ... mhlawumbi zinokulawulwa ngumaleko endaweni yokuba ukhethe kuphela ukuzisa ngaphambili okanye ukuthumela ezantsi.
8 Inketho yokubona ukulungiswa kopelo kwiqhosha lasekunene le mouse, hayi iZwi leMicrosoft, kodwa yoyikeka ukuba uqhuba umkhangeli wopelo ekugqibeleni.
9 Hlanganisa i-layerstate ne-Viewport
10 Ukujonga okukhawulezayo kwinto engingqimba, oku ngenjongo yokuba umphathi womaleko angabonisa umbono we-thumbnail. Kuya kuba luncedo kakhulu xa unamaleko anamagama adidayo ukuba kuya kufuneka wenze "umaleko wohlula"
Ke ukuba i-AutoCAD iyayiphumeza le nguqulo ye-2010, abasebenzisi bolu khuphiswano baya kufumana izinto eziqhelekileyo ezifana "nembono kunye nemodeli kumnqweno we-9", umohluko phakathi kwemiyalelo esebenzayo kunye nokujongana nomnqweno we-4 kunye nesiginesha yedijithali yomnqweno we-1 .
UVictor Chacon uthi:
Andiyithandi kwaphela, ngenxa yokufuna ukukhawulezisa ezinye izinto, bashiya umsebenzi ophambili womyalelo, njengokuba "ISOLATE" ezinye iileyile azisafihlwa (njengakwiinguqulelo zangaphambili) kodwa zenziwe "transparent". "kwaye ayiyomisebenzi efanayo, efana nokwenza izithunzi okanye izinto ezinjalo
Vimba ubungakanani obuqinileyo, ingcamango efanelekileyo, eya kuziphatha kunye nefomathi yamaphuzu e-AutoCAD anokufumana ipesenteji yobukhulu beenyawo okanye njengempawu zeenkqubo ze-GIS
Into kuphela engayikhoyo kwi-Autocad, ibhloko engazange ilandele i-zooms, oko kukuthi, ayitshintshi ubungakanani beskrini; Oku kuya kwenza ukuba kubekho ubungakanani obufanayo xa ushicilela. Into esimele siyenze ibeka oko sifuna ukukuprinta kwinqanaba elifanelekileyo.
7. kwizigaba ezithile komyalelo umzobo, oku ukwenzela ukulawula umyalelo ukubonisa bezinto, ingakumbi xa zizaliswe ... mhlawumbi loo nto ilawulwa umaleko kunokuba kuphela ukhetho ukuze kuziswe ngaphambili okanye ukuthumela uzakubuyela . !!!!!!